यदि तपाईं WIC मा नयाँ हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको भिडियो हेरेर सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई WIC स्टाफलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ भने, कृपया 'WIC क्लिनिक फेला पार्नुहोस्"विकल्पमा अनुप्रयोगमा वा परिवार स्वास्थ्य हॉटलाइन कल 1-800-755-GROW (4769). के तपाईंलाई अनुप्रयोगसँग समस्या छ? ईमेल JPMA मा [ईमेल सुरक्षित]
दिमागमा राख्नुहोस् कि WICShopper ले ताजा फलफूल र तरकारीहरू स्क्यान गर्न सक्दैन र कहिलेकाँही स्टोरहरूले आफ्नै प्याकेजि use प्रयोग गर्दछ जुन अनुमोदित उत्पादनहरूको सूचीमा नहोस्। यद्यपि सबै पुरा, पूर्व कटौती, कटाई या व्यक्तिगत सेवा को आकार बिना सस या डीप्स अनुमति छ। त्यहाँ केही नियमहरू छन्, त्यसैले थप विवरणहरूको लागि एपमा तपाईंको खाना सूचीमा उल्लेख गर्नुहोस्।
मेरो लाभ शेष
WICShopper अनुप्रयोगले तपाइँलाई तपाइँको WIC बेनिफिटहरूको ट्र्याक राख्न र रेजिष्टरमा तपाइँलाई कुनै समस्या नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न तपाइँको बाँकी सुविधाहरूको बिरूद्ध उत्पादनहरू स्क्यान गर्न अनुमति दिनेछ। यदि तपाईंले अझै आफ्नो eWIC कार्ड दर्ता गर्नुभएको छैन भने सुरू गर्नका लागि 'मेरा लाभहरू' बटन ट्याप गर्नुहोस्!
महत्वपूर्ण नोट: तपाईंले देख्नु भएको लाभहरू एक दिन सम्म ढिला हुन्छ। तपाईंको सुविधाहरू पर्दाको शीर्षमा जाँच गर्न नबिर्सिनुहोला कि लाभहरू WICShopper मा कहिले अपलोड गरियो। दिमागमा राख्नुहोस् कि त्यसपछिको शपिंग यात्राहरू तपाइँको लाभ रकममा प्रतिबिम्बित हुँदैनन्!
A: तपाईंको जारी गरिएको WIC क्लिनिकमा तपाईंको तस्वीर आईडी लिनुहोस् र तुरुन्त रिपोर्ट गर्नुहोस्! तपाईं हराउनु, चोरी वा बिग्रिएको कार्ड प्रतिस्थापन गर्नु अघि त्यहाँ पर्खाइ अवधि हुनेछ।
A: तपाईंको WIC खाद्य पदार्थहरू तपाईंको WNC मा तपाईंको क्लिनिक भ्रमणको क्रममा लोड गरिनेछ। एक पटक क्लिनिकले तपाइँको WIC खाद्य पदार्थहरू तपाइँको कार्डमा लोड गर्‍यो, तपाइँ तत्कालै किनमेल गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाइँ तपाइँको WIC खाद्य पदार्थहरू खरीद गर्नुहुन्छ, ती तपाइँको कार्डमा रहेको भोजन ब्यालेन्सबाट हटाइनेछ।
A: तपाईं WICShopper मा "क्याप्चर रसीद" प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको eWIC ब्यालेन्स रसिदको छवि प्रत्येक पटक तपाईले किन्नुपर्‍यो। तपाईं आफ्नो WIC क्लिनिकमा र सेवा डेस्क वा स्टोरमा चेकआउटमा आफ्नो ब्यालेन्स पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
A: WNC पुन: प्रयोग योग्य छ। तपाईंको WNC बचत गर्नुहोस् र तपाईंको नयाँ WIC अपोइन्टमेन्टमा लैजानुहोस् तपाईंको नयाँ खाद्य वस्तुहरू यसमा लोड गरिएको छ।
पहिचान गर्न असमर्थ - यसको मतलब अनुप्रयोगले निर्धारण गर्न सक्दैन यदि आईटम WIC- योग्य छ। यो पसलमा कनेक्टिविटी नभएको कारण हुन सक्छ। वाइफाइ जडान वा स्टोर मा एक स्पट खोज्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् जहाँ तपाईं राम्रो सेवा पाउनुहुन्छ।
तपाईको लेनदेनको अन्त्यमा कार्ड रिडरबाट तपाइँको कार्ड हटाउन सुरक्षित हुँदा क्यासियरले तपाइँलाई बताउनेछ। WIC लेनदेन स्वीकार गर्न "हो" थिच्नुहोस् वा यसलाई अस्वीकार गर्न "हो" थिच्नुहोस्। एक पटक तपाईले "हो" थिच्नुभयो भने कुनै परिवर्तनहरू गर्न सकिदैन।
स्तनपान शिशु वस्तु
यो वस्तु ओहायो WIC को प्रमाणीकरण प्रणालीमा तपाईंले आमाको दूध उपलब्ध गराइरहनुभएको छ भनी नोट गर्नको लागि तपाईंको रसिदमा सूचीबद्ध गरिएको छ। तपाईको बच्चालाई उत्कृष्ट सुरुवात दिनु भएकोमा बधाई छ! थप स्तनपान र पम्पिङ सहयोगको लागि, आफ्नो स्थानीय WIC क्लिनिक स्टाफ र स्तनपान साथीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंले 24/7 ओहायो राज्यव्यापी स्तनपान हटलाइनमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 888-588-3423, र स्तनपान पेशेवरहरूबाट मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्
बिक्री नगर्नुहोस्, व्यापार नगर्नुहोस् वा तपाईंको पिन वा कार्ड टाढा दिनुहोस्। WIC सुविधाहरूको दुरुपयोग एउटा अपराध हो।